“ကံကြမ္မာအကျိုးတူဖော်ဆောင်ခြင်း-၂၀၂၁" ငြိမ်းချမ်းရေးစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုအားတရုတ် တွင် ဆက်လက် ကျင်းပ - Xinhua News Agency
“ကံကြမ္မာအကျိုးတူဖော်ဆောင်ခြင်း-၂၀၂၁" ငြိမ်းချမ်းရေးစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုအားတရုတ် တွင် ဆက်လက် ကျင်းပ
ကျန်းကျိုး၊ စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ ဟဲနန်ပြည်နယ်တွင် နိုင်ငံတကာ မှ ပူးပေါင်းပါဝင်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုအားဆက်လက်ကျင်းပလျက်ရှိသည်။
စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုအား “ကံကြမ္မာအကျိုးတူဖော်ဆောင်ခြင်း-၂၀၂၁” ဟု အမည်ပေးထားသည်။
ယခုစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကို တရုတ်တပ်မတော်မှ ပထမဆုံးအကြိမ် ဦးဆောင်လေ့ကျင့်ခြင်းဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံအပါအဝင် မွန်ဂို၊ ပါကစ္စတန်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံမှ စစ်တပ်များပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွင် စစ်မြေပြင်ထောက်လှမ်းရေးလေ့ကျင့်မှုများ၊ လုံခြုံရေးစောင့်ကြပ်မှုနှင့်ကင်းလှည့်ခြင်း၊ လက်နက်ကိုင်အစောင့်အရှောက်များ၊ အရပ်သားများအားအကာအကွယ်ပေးခြင်း၊ ဆူပူအုံကြွမှုများနှင့်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခြင်းများအားတုံ့ပြန်ခြင်း၊ ယာယီစစ်ဆင်ရေးအခြေစိုက်စခန်းတည်ဆောက်ခြင်း၊ စစ်မြေပြင်ရှေး ဦးသူနာပြုစုခြင်းနှင့် ကပ်ရောဂါထိန်းချုပ်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။
စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက် အထိ ကျင်းပသွားရန်လျာထားသည့် စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု သည် ကုလသမဂ္ဂ၏ ” ငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်” ဆိုင်ရာ မူဘောင်အောက်တွင် လက်တွေ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှုအရံတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်များ မြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်ကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများထဲတွင် တပ်ဖွဲ့အင်အားအများဆုံး စေလွှတ်ထားသည့်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ် ၃ ခုအတွင်း တရုတ် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များသည် ကုလသမဂ္ဂ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် ၂၅ ခုအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်သားပေါင်း ၅၀,၀၀၀ ခန့် စေလွှတ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိတွင် တရုတ်ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ပေါင်း ၂,၂၄၁ ဦးသည် ကုလသမဂ္ဂ ရုံးချုပ်နှင့် ကုလမှ စေလွှတ်ထားသည့် မစ်ရှင် ၇ ခုတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ (Xinhua)
GLOBALink | “Shared Destiny-2021” peacekeeping drill underway in Henan, China
ZHENGZHOU, Sept. 10 (Xinhua) — An international peacekeeping drill is currently underway in Henan, China.
The exercise is code-named “Shared Destiny-2021.”
It’s organized for the purpose of responding to the UN’s “Action for Peacekeeping” initiative, promoting practical cooperation and making joint efforts to enhance the peacekeeping standby forces’ capability of carrying out tasks.
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ ကဘူးလ်လေဆိပ်တွင် နိုင်ငံတကာလေကြောင်းခရီးစဉ်များအတွက် မကြာမီအသင့်ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း တာဝန်ရှိသူပြော